एक महिलाको मेशिन - यो के हुनुपर्छ?
वास्तवमा हामी सबैले मेरो जीवनमा कम्तीमा एकपटक अभिव्यक्ति सुनेका छन्: "ओह, त्यसैले यो एक महिला कार हो!" नियमको रूपमा, यो भीडबाट कसैले बाहिर छ जब एक रोचक कार नारंगी वा रातो रंगको लिपस्टिकबाट पास हुन्छ। त्यसैले यो के हो? के त्यहाँ साँच्चै महिलाका कारकहरू छन्? त्यसो भए, डीलर्सहरूले निर्दिष्ट नभएसम्म यति ठूलो एसभीवीहरू बेचेर यसो भने: "माफ गर्नुहोस्, तर तपाईं यसमा जानुहोस् वा एक कमजोर महिला हुनुहुन्छ?" जस्तै उचित सेक्सको प्रतिनिधि व्हील पछि भेटिन्छ, संसारको चित्र तुरून्तै फर्किन्छ, र यो लाग्न सक्छ ठूलो मोटो मानिसको कारमा, ताकि पृथ्वी फेरि आफ्नो कक्षामा फर्कियो।
गुलाबी र प्यारा
र गम्भीरतापूर्वक, अवश्य, automakers को बीच लिङ्गहरु द्वारा कारहरुको एक अनावश्यक विभाजन छ। यो अनिवार्य छैन। खैर, यो यति भयो कि, उदाहरण को लागि, एक लामो गोलो कालो जीप को चयन गर्न को लागी छैन। उनीहरुलाई सानो सानो गुलाबी मेशिन मनपर्छ, जुन शहरी यातायातमा व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ। एकै समयमा, ठूलो आयामहरूको एक व्यक्ति (यदि उनीहरूलाई अनुमति दिइएको छ भने वित्त) निश्चित हुन्छ, ठूलो र रूखको कार रोज्नुहोस्। सबैभन्दा रोचक कुरा यो हो कि एक विशेष यौन सम्बन्ध को सिद्धान्त अनुसार मिसिनहरु को विभाजन सही लिंग को प्रतिनिधिहरु लाई सम्बद्ध छ। पत्रकारहरूले एक सर्वेक्षण गरे।
पुरुषहरु र महिलाहरु को कारहरु को विभाजन को मजबूत सेक्स संग सम्बन्धित छ?
उत्तरदायीहरूलाई सोधिएको थियो कि महिला कार ब्रान्डहरू थिए। लगभग निष्पक्ष यौनका सबै प्रतिनिधिले यस्तो जवाफ दिए कि त्यहाँ यस्तो विभाजन थिएन। कारहरू ब्रान्डहरू, शरीरका प्रकारहरू, इञ्जिन पावरमा विभाजित हुन्छन् तर तर जसले तिनीहरूलाई सवारी चालु हुँदैन। तर पुरुषहरूले सबै एक प्रकारको प्रश्नको साथ सहमत गरे। उनीहरूले विश्वस्तताले भने कि हाँ, साँच्चै त्यहाँ महिलाको मेशिनको रूपमा त्यस्ता घटना हो। यो सानो, कम्पैक्ट, दर्पण संग भरिएको छ ताकि तपाईं कुनै पनि समयमा आफ्नो कपाल वा नाक पाउडर, र लिपस्टिक र काजल को लागि सबै प्रकारको जेब गर्न सक्नुहुनेछ।
अमेरिकामा, यसबारे केही थाहा छैन
यो ध्यान दिनुपर्छ कि मोटर यातायातको यो मनोवृत्ति मात्र रूसमा छ। पश्चिममा यो विभाजनको बारेमा लगभग केहि पनि थाहा छैन। ओटो निर्माताहरूको अध्ययनले देखाउँछ कि महिलाहरू पुरुषहरूको कल्पना भन्दा कारका छनौटहरूको बारेमा धेरै गम्भीर छन्। उदाहरणका लागि, सामान्य गलत धारणाहरु को अतिरिक्त कि महिलाहरु लाई रंग र आकार को द्वारा निर्देशित गरिन्छ, वास्तव मा, कार उत्साही पनि सुरक्षा र विश्वसनीयता को बारे मा सोचना। महिलाहरू इन्जिनहरू, ट्राफिक उपकरण, डिस्कको आकार र विनिमय दर स्थिरतामा उनीहरूको प्रभावमा जोड्न थाले। तिनीहरू चट्टानको पछि लाग्दा पुरुषहरूले अलिकति महिलाहरूलाई कमै पार्छन्।
स्कर्ट मा प्रोफाइल
सामान्यतया, यो ध्यान दिनु पर्छ कि गत केहि वर्षहरुमा हाम्रो प्यारी महिलाहरु कारहरुमा बहुमूल्य देखिन्छन्। यो तथ्याङ्कहरू द्वारा पुष्टि गरिएको छ। यो बाहिर जान्छ कि एक सुन्दर सेक्स धेरै पटक प्रायः कम्प्युटरहरू खरीद र परिवर्तन गर्दैछ। कार ऋण प्राप्त गर्ने महिलाहरूको संख्या दिन बढ्दै गएको छ। यसबाहेक, फोर्ड, मर्सिडीज, अडीको रूपमा यस्तो विश्व निर्माताले धेरै सन्दर्भमा महिलाहरूलाई बाध्यता गरेका छन् कि उनीहरूले आलोचनालाई कारवाहीका पछिल्ला पीढ़ीहरूलाई सुन्दर र आरामदायक चीजको वजनमा ल्याईएका छन्। त्यसैले, उदाहरणका लागि, त्यहाँ एक शक्ति स्टीयरिंग, मफलर र जेनेटर थियो। आज, यसको बिना, कार अज्ञात छ। तर एक पटक यी सबै महत्वपूर्ण साना लोशनहरू मात्र अवस्थित थिएनन्।
र हाम्रो महिलाहरूको लागि धन्यवाद, ती सबैजसो सहज, सहज र सुन्दरतापूर्ण सुन्दरताका लागि प्रयास गर्दै, आधुनिक स्वतन्त्र उद्योगको अझ राम्रो भयो। जसले जान्दछ, शायद आफ्नो मोडेलहरू एक सुव्यवस्थित रूप, निवारण डिजाइन र परिमार्जित रोशनीहरू, नीयन लाइट डिलिङ गर्नका लागि ठूलो चिन्ताको आजको चाहना पनि महिलाहरुबाट प्रेरित हुन्छ?
यो रोचक छ।
रूसको कम्पनी स्कोडाको अनुसन्धानको परिणामस्वरूप यो पत्ता लगाइएको थियो कि महिलाहरूले विचार गरे कि कुनै पनि आधुनिक कार बिना स्वचालित ट्रांसमिशन, कंडीशनर, सुरक्षा र पार्कटोनिक्स सम्मको प्रविधि संग सुसज्जित हुनुपर्छ। यो एक राम्रो र उद्देश्य विचार हो। तपाई के सोच्नुहुन्छ? प्रकृति द्वारा महिलाहरूलाई सान्त्वनाको लागि केहि विशेष इच्छा दिइएको छ। तिनीहरू सबैलाई यो बनाउन प्रयास गर्छन्। यसकारण, मशीनहरू आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छन्। आज यो सामान्य सामान्य मानिन्छ कि "स्वचालित" सबै महिला कारहरू अनिवार्य छन्।
र महिलाहरूले के सोच्छन्?
पश्चिमी देशहरूको अनुभवले लिङ्ग को बावजूद, अधिकांश बासिन्दाहरु लाई सानो, आर्थिक मोटर परिवहन को लागी रुचि गर्दछ। यो कारण हो, पहिले, कम कर दर संग, र दोश्रो, शहरी यातायात मा पार्किंग र उन्मुख को सुविधा संग। अन्तमा, यो तपाइँको परिस्थितिको बारेमा घमन्ड गर्नको लागी अनुकूलन छैन र तपाइँ सबै भन्दा माथि हुनुहुन्छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईले पाँच-लिटर निलो खर्च गर्न सक्नुहुनेछ।
रूसमा, स्थिति बिल्कुल विपरीत छ। छालाबाट हामीका साथीहरू चढ्दैछन्, केवल आफ्नो छिमेकीलाई सामाजिक स्थितिमा पार गर्न। यदि एक व्यक्ति ठूलो छ भने, त्यो जरूरी ठूलो कारमा बस्नेछ। के तपाईंले कहिल्यै सानो "ओका" मा एक ठूलो केटा देख्नुभयो? हामीले यो अत्यन्तै राम्ररी देख्न थाल्नु पर्छ।
सबै भन्दा राम्रो चालकहरू
उनी भन्छन् कि स्टेरियोप्राइपहरू बेवास्ता गर्न उत्तम विकल्प हो - आफ्नै असंगति पुष्टि गर्नको लागि आफ्नै उदाहरणद्वारा। केवल क्रूर मञ्च र परिष्कृत महिलाहरूको लागी मात्र मशीनहरु असंगत छन्। यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि तथ्याङ्कहरू के भन्न सकिन्छ, यो स्पष्ट हुन्छ कि महिलाहरु एक दुर्घटनामा पुग्न सम्भावना कम छन्, अझ बढी यसको यसको शिकार हो। यो, एकै ओर, अजीब देखिन्छ, विशेष गरी जब तपाईं देख्नुहुन्छ कि तिनीहरू कसरी सख्त सडकमा झगडा गर्दै छन् वा साधारण पार्किङको सामना गर्न सक्दैनन्। तथापि, यसको खातिर निष्कपटता ध्यान दिनुपर्छ कि पुरुषहरू बीच धेरै छन् जो हाइपरमार्केटमा मात्र पार्किङ स्थानमा फिट हुन सक्दैन।
प्रसिद्ध ब्रान्डहरु को विक्रेताहरु ले नोट गरे कि महिलाहरु लाई एकदम कम छ चुन्नुहोस स्वतः। कुनै सानो कुरा सपना हेरेर छनौट गर्दा महिला आँखाबाट बचाउँछ। सामान्यतया, कन्फिगरेसन छनौट गर्ने महिलाहरूले स्वचालित ट्राफिक, जलवायु नियन्त्रण, गरम सीटहरू, एमपी 3, पावर विन्डोहरू, अगाडि र साइड एयरब्याग, एबीएस र ईएसपीमा आफ्नो प्राथमिकता दिन्छ। यो सामान्यतया न्यूनतम आवश्यक छ। यसको अतिरिक्त, महिला कार प्राय: छाला घरको संग सुसज्जित छ। त्यहाँ अन्य "घण्टीहरू र सीइस्टहरू हुन सक्छन्"।
महिला कारहरू: ब्रान्डहरू, फोटोहरू
आइतबार केही कारहरू हेर्नुहोस् जुन प्रायः महिलाहरु द्वारा खरिद गरिन्छ। पहिलो स्थान फिएट 500 को लागि एक सानो, स्वच्छ र सुरुचिपूर्ण "इटालियन" को लागी सानो स्लांटिंग "आँखों" संग तय गरिएको थियो। ह्याचब्याक शहरी परिस्थितिमा अपरेशनको लागि बिल्कुल उपयुक्त छ। कार पार्क गर्न सजिलो छ, यो वाहनों को नजिक को प्रवाह मा पुरा तरिकाले उत्तेजित गर्दछ। ईन्धनको खपत एकदम कम लिटर7लीटर प्रति 100 किलोमिटर छ। राजमार्गमा फिएट2लीटर कम हुन्छ।
निर्माताले यो कार एक व्यक्तिको लागि एक उत्कृष्ट सहायकको रुपमा लिन्छ, जसलाई स्वभावले प्रायः ठूला महानगरीयहरूमा जान्छ। यो अपरिवर्तनीय छ यस्तो एक मेशिन एक गृहिणीको लागि हुनेछ। यसमा तपाईं खुसीसाथ भोजन खरीद गर्न वा एक आरामदायक क्याफेमा साथीको साथ बैठकमा जानको लागि सुपरमार्केटमा जान सक्नुहुन्छ। दिइएको मोडेल फिएट को लगभग 14 000 यूरो खर्च गर्दछ।
एक दशक भन्दा बढीको लागि, सुन्दर स्त्रीहरू राम्रो पुरानो "बग" मा हेर्न सकिन्छ। भोक्सवैगन बिलेटले हाम्रा महिलाहरूलाई जिते? सम्भवतः, यसको सबै रोचक डिजाइन। कार धेरै राम्ररी देखिन्छ, र यसको ठूलो दौर हेडलाइटहरू छविमा केही प्रकारका बालबालिकाको असामान्यता ल्याउँछन्। वैसे, यो रखरखाव मा व्यावहारिक र सरल छ। शहरमा, उनले "7 लीटर" खाए, र सडकमा साथसाथै फिएट, दुईवटा एकाइ कम। भरिएका "बीटलहरू" कार निर्माताहरूको प्रेमीहरूका लागि राम्रो भरिको साथ विशेष संस्करणहरू प्रदान गर्दछ। यो एक Volkswagen बीटल को 18000 यूरो को लायक छ।
र यो कसरी प्रेमी बिना छ - बच्चा निसान माइकरा? यो क्यारेक्टरसँग कार हो। केवल शिकारी आँखाहरू हेर्नुहोस् - र तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि कारमा केहि विशेष सम्मान छ र यसको सानो साइजको बावजुद उत्कृष्ट सहायक र मित्र हुन सक्छ। यसैले, निसान माइकरा हाम्रो शीर्ष "सर्वश्रेष्ठ महिला कारहरु मा शामिल छ।" यो पुरा तरिकाले संतुलित छ, यो वास्तव मा घने शहर यातायात को शर्तों मा प्रबंधन को लागि सुखद छ।
यो ध्यान दिइनेछ कि निर्माताहरूले यस कारमा धेरै राम्रो र उपयोगी विभागहरू प्रदान गरेका छन्, जुन सजिलै भित्तामा वा अन्य उपयोगी स्त्रीन चिनहरू फिट गर्न सक्छन्। यदि हामी मेशिनको प्राविधिक घटकबारे कुरा गर्छौं, त्यसपछि यहाँ सादगी र व्यावहारिकता प्रबल हुन्छ। कार राम्ररी फरक छैन र यो असामान्य तेल परिवर्तनको कारणले गर्दा मर्मत हुने छैन वा मर्मतको पास नभएसम्म यो असन्तुष्ट हुनेछ। म नोट गर्न चाहन्छु कि सबै (आकस्मिक) महिला "स्वचालित" मिसिनहरू सामान्य र संवेदनशील हुन्छन्। कारहरू ग्यासलाई छुटाउन तुरुन्तै जवाफ दिन्छ। यसकारण, हाम्रो प्यारी स्त्रीहरू पनि सुन्दरता सैलूनमा वा फैशनेबल जूताहरू बिक्री गर्न सकिँदैन।
त्यहाँ सबैभन्दा स्त्री स्त्री हो?
महिलाहरु संग धेरै लोकप्रिय पनि स्टाइलिश "अमेरिकन" मिनी हो। यो कारमा महिलाहरु को यस्ता चासोले कस्तो कारण दिन्छ? सायद, त्यो तथ्य जो कि उसले तुरुन्तै रिश्वत गर्दछ। यो चमत्कारले केहि प्रकारको विशेषताको स्पर्शको साथ सादगी र उत्पत्तिलाई जोड दिन्छ। तकनीकी विशेषताहरु र ईंन्धन खपतको अनुसार, MINI माथिको मोडेलबाट टाढाको छैन। तर मूल्यमा उहाँ नेता हुनुहुन्छ। न्यूनतम विकल्पहरूको लागि लगभग 19000 यूरो लगाउनु पर्छ। आश्चर्यजनक कुरा होइन, उदाहरणका लागि, रूसमा यो प्रकार धेरै सानो छ। तर सेटमा अन्य साना महिला कारहरू प्रतिनिधित्व हुन्छन्।
सामान्यतया, "महिलाको मेशिन" वा पुरुषहरूले आफ्नो शुद्ध रूपमा अवधारणाहरु द्वारा मात्र अवस्थित छैन। सायद वाक्यांश "मेरो मनपर्ने कार" थप लागू हुन्छ। यो अधिक सत्य हो। र लिङ्ग-आधारित विभाजन गलत छ। एक महिला कार मात्र कार हो जुन महिलाले छनौट गर्यो। विक्रेताहरूले यो सत्य पुष्टि गर्छन्। यो उल्लेखनीय छ कि जब महिलामा 20,000 डलर छ भने, उनको छनौट सामान्यतया एक क्रूर व्यावहारिक मानिस को छनौट देखि फरक छैन। त्यस्ता घटनाहरूमा देवताहरू विशाल शहरको पार्क वा स्पोर्ट्स सिजनहरू हुन्छन्। यद्यपि, जुनसुकै सुन्दर महिलाहरु वा हाम्रा क्रूर पुरुषहरूले आफ्नो ध्यान रोक्न, सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि उनीहरूले ट्राफिक नियमहरू हेर्छन्।
सबैभन्दा ठूलो कारखाना
Peugeot 206 - समीक्षा गर्नुहोस्!
सैलुन ट्यूनिंग VAZ-2121 आफ्नै हातहरू
W211 को शरीर मा कार "मर्सिडीज E320" को लक्षण
भण्डारण कक्ष संग हलवे मा मल सान्त्वना हुनेछ
Unicellular Fungi र प्रकृति आफ्नो भूमिका
यो के Paleolit-? Paleolithic
छुट्टी को गाँउ «Vokhotka»: विवरण, विशेषताहरु, सेवाहरु र पर्यटकहरु को समीक्षा